Le discours inaugural de la Ministre HARIMISA lors de l’atelier des chefs de greffes du 20 au 22 juin 2018 à Antananarivo | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Harimisa Noro VololonaLe discours inaugural de la Ministre HARIMISA lors de...
Le discours inaugural de la Ministre HARIMISA lors de l’atelier des chefs de greffes du 20 au 22 juin 2018 à Antananarivo
“Andro iray toa zato ity, indrindra ho anareo mpiandraikin-draharaha satria ianareo izao no voalohany andraisako fitenenena mikasika ny atelier na fivoriana toy izao. Koa dia isaorantsika Andriamanitra ny amin’izany rehetra izany satria mino aho fa tsy misy zavatra tongatonga ho azy izany fa zavatra efa voalahatra daholo izao rehetra izao, indrindra izao fotoana izao, satria na nikasa aza ianareo, na nikasa aza isika ka tsy sitrak’Andriamanitra ny anantanterahana an’izany dia ho zava-poana ihany tokoa izany, koa dia Voninahitra ho an’Andriamanitra.
Manaraka izay dia fiofanana sady atrikasa moa no atrehanareo eto mandritra ny 2 andro, tsy nanomana kabary an-tsoratra aho satria tsy dia izay loatra, fa ny ahy izany rehefa mikabary ohatran’izao dia tsy resa-be fa tonga dia asa.
Nisafidy ianareo ny lohateny hoe: Mpirakidraharaha mendrika antony ny fitokisana ny Fitsarana nataonareo tamin’ny teny frantsay ilay izy hoe: Un bon greffier garant de la crédibilité de la justice.
Ny atao hoe « Bon » dia tsara fa tsy mendrika, « digne » angamba fa dia afaka atao hoe izany hoe « un greffier digne garant de la crédibilité et de la justice »
Ny dikany hoe tsara dia zavatra telo :
Mpirakidraharaha manana ny atao hoe « savoir » : ny fahalalàna ampy hoentina hiasa, hanao ny asa amin’ny maha-mpirakidraharaha. amin’ny fanatovozana fahalalana eny anivon’ny sekoly isan-karazany no ahazahoana izany fahalalana izany, tsy ao anatiny fihofanana ihany anefa izany.
Misy ny atao hoe “ formation initiale » sy ny « formation continue », fa ao anatiny fikarohana satria amin’izao fotoana izao dia misy ny nouvelle technologie de l’information et de la communication (NTIC), ary mino aho fa ianareo lehibean’ny mpirakidraharaha rehetra eto androany dia efa mahafantatra ary mahay mikirakira izany nouvelle technologie de l’information et de la communication izany izay ny voalohany manana fahalalana. Savoir falalana ampy hoentina miasa.
« Savoir-faire » : Ny fahaizana, traikefa ,fahaizana manantaterak ny asa, tsy ampy ny hoe manana diplôme de l’école national de la magistrature et de greffe dia mavita ny asa izaho , tsy izay ilay izy. Fa anananao ilay izy fa hainao ve ny mampiasa azy ? ny mampiatra an’izay fahaizana notovoizinao izay na taiza na taiza, izay ilay hoe savoir-faire. Fahaizana mitantana ny olona eo ambany fifehezana, fahaizana mandamina ny asa, ary fahaizana ihany koa mijery ao anatin’izay fandaminana ny asa izay, fijerevana sy fanavahana ny hoe inona ny maika ? Inona no tena zava-dehibe ? satria tokony hanana an’izay leadership izay daholo. Be dia be mantsy ny asa ary important sy urgent daholo fa ny fahaizana manavaka an’izay ny hoe inona no tokony atao aloha? Inona no manarakaraka? Inona ny ao aoriana? Izay ny atao hoe savoir-faire na ny fahaizana mampiasa ny fahaizana izay nananana.
Ao anatin’izay fahaizana izay koa ao anatiny savoir-faire ; ny fahaizana mitantam-bola; satria ianareo chef de greffe: maro ny vola miditra ao anatin’izany greffe izany, ary eo indrindra no ametrahako toro-lalana sy toromarika avy hatrany mikasika ny fomba fitantanana ny greffe , na ny commercial na ny pénal na any amin’ny civile, volam-bahoaka no tantanana any aminareo fa tadidio, misy amin’ireo olona ireo izay mandoa, ireny vola ireny eny anivon’ny fitsarana tena olona mahantra, tena tsy manam-bola fa saingy tsy maintsy voatery satria tsy maintsy misy ny vola, ampahany izay tsy maintsy aloha amin’ny fanjakana satria izay moa no misy. Ka misy amin’izy ireny, voatery aza manjary mitrosa, ao anatin’izany anefa ny fitsarana dia tadidido tsara fa natao ialofan’ny mahantra, sy ny tsy mba manana vola fa tsy natao ho an’ny manana koa dia izay no nitenenako teto hoe : « tandremo fa volam-bahoaka no tantananareo ka aoka mba ho ampiasaina amin’ny zavatra izay tokony ilaina an’azy fa tsy ho ampiasaina amin’ny zavatra izay tsy tokony ilana azy na amenoana paosy ho any tena samy irery. Mametraka an’izay toromarika izay aho, ary mapita sahady ho anareo lehiben’ny greffe manerana an’i Madagasikara hanaramaso ny fomba fitantananareo izany vola izany ny tenako. Tsy hiditra amin’izay zavatra tena ataonareo aho momba izany fa kosa mijery ny fomba fampiasanareo an’izany vola izany, moa ve mandeha amin’izay tokony ho izy ?.
“Savoir être”: fahaizana mitondra tena mba hijeren’ny olona sy hitarafan’ny olona hoe manao ahoana izany mpirakidraharaha izany, ary ianareo no tari-dalana an’izany, ianareo no lehibean’ny greffe rehetra manerana an’i Madagasikara ka ny endrika asehoanareo no fitaratra hijeren’ny olona ny greffe eo ambanin’ny fifehezanareo, fahaizana mitondra tena izay no atao hoe savoir être.
Ny fahitan’ny olona hoe tena mahavita ny asany io chef de greffe io, satria rehefa misy zavatra na raharaha ao amin’ny fitsarana dia tsy mitaraina ny vahoaka fa tena mandeha amin’ny tokony ho izy, ara-potoana, arak’izay zavatra mety mab nantenain’ny justiciable rehetra amin’izany hoe fitsarana izany, izany hoe greffe izany. Fa impiry tokoa moa isika no tsy mandreha, oe mitaraina ny vahoaka amin’io resaka greffe io, ampivezivezena in-droa, in-telo, in’efatra; izay voa hazo ny didim-pitsarana. Impiry koa isika no tsy mandreha fa mila gouter ny greffier ka rehefa tsy mahazo gouter dia tsy manao ny asa, ka hoy aho hoe : « aok’izay ny fomba ratsy rehetra, havaozy ny fitondra-tena, havaozy ny fomba fisainana, havaozy ny fomba fiasa », fa tsy ny mpitsara ihany no nomen’Andriamanitra ny fahefam-pitsarana, satria izay no noteneniko tamin’ny voa nandray ity andraikitra ity tamin’ny passation hoe tsarovy fa ny « pouvoir de juger » na ny fahefana hitsara « fahefan’Andriamanitra », fa matoa isika mpitsara manana an’izay privilège izay , dia satria Andriamanitra no nanome an’izany, nampindraminy antsika, fa tsy ny mpitsara ihany, ianareo greffier koa, tadidio fa matoa mandeha ny eo amin’ny fitsarana, matoa andrandrain’ny olona ny fitsarana, tsy mitsara irery koa satria manana andraikitra be dia be ao anatin’izany hoe didim-pitsarana izany, mpitsara no manapaka sy mandidy fa ianareo kosa no mi-authentifier ny acte, zava-dehibe izany. Ka hoy aho hoe « ovay ny fomba fijery , ovay ny fomba fisainana, ovay ny fomba fiasa », dia tsarovy fa asa masina ny asantsika, na mpitsara na greffier . Marina fa misy ny paikady isan-karazany oentina miady an’izany kolikoly izany, amiko kosa hoy aho hoe tsy misy dikany ireny rehetra ireny raha tsy isika mihintsy no vonona hoe izaho « je m’engage » tsy hanao izany intsony aho raha efa nanao, tsy anao intsony, tsy anao mihintsy aho raha mbola tsy nanao, fa raha miaramiainga isika , vonona hifampitantana aminareo aho ary vonona ny hanohana anareo amin’ny zavatra rehetra izay ataonareo. Ka hoy aho hoe ho anareo miankoha ho an’izay fahaiza-miaina tsinjovy ny olona eo ambany ny fifehezanareo, misy vola miditra be dia be eo anivonareo eo anivon’ny greffe ; jereo ny ara-tsosialy, an’ireo olona eo ambany ny fifehezanareo, aza variana amina zavatra tsy misy fotiny fa ataovy izay mba hampifalifaly ireo namanareo ireo, izay niara-niasa andro aman’alina, niaraka aminareo dia ataovy amin’ny ara-drariny, ary ataovy amin’ny ara-dalàna ny fomba fitondrana an’izany vola miditra eo anivon’ny greffe izany, na commercial izany na civile na pénal, izany rehetra izany ao anatina fahaizana mitondra tena.
Koa dia hoy aho hoe zava-dehibe ity andro androany ity koa dia misaotra an’Andriamanitra aho satria ny message voalohany ampitaiko izany ho an’ny greffe manerana an’i Madagasikara izany ary dia inoako fa ampitainareo lehibe tsirairay avy izany toro-lalana sy toromarika ataoko izany, fa mapitandrina kosa aho, satria angambany efa 30 taona mahery no naha mpitsara ahy sady efa juge d’instruction aho no efa substitut du procureur de la République aho, efa vis-président du tribunal izaho, efa juge des enfants izaho, efa nataoko daholo ny asa rehetra ao amin’ny ordre judiciaire nandritra ny taona maro, ka hoy aho hoe aiko io, fantatro io, koa dia hoy aho hoe : mino aho , matoky aho fa dia manomboka androany isika mba ho tarafiny olona , aok’izay ny fomba ratsy rehetra , izay hanenjehan’ny olona antsika isan’andro isan’andro mampalahelo, fa hisandratra isika raha miaraka amiko ianareo ka vonona, ary dia mahazo matoky ianareo, ho anareo satria, ianareo solotena eto, mino aho fa ho modely koa ianareo satria ka, handray anareo aho amin’ny herinandro miaraka amin’ny administration pénitentiaire, ny SMM moa efa noraisiko ihany koa, izaho olon’ny dialogue , afaka miresaka aho , afaka mihaino anareo aho fa saingy izao kosa tsy afaka manao izay tsy azoko atao aho, ny zavatra azoko atao dia ny ho ato, ary matokia ianareo fa raha eo ampelatanako ny fomba sy ny zavatra rehetra azoko atao hanatanterahina izay mampalahelo anareo dia ho ataoko izay, fa izaho kosa tsy hanao promesse d’ivrogne ka hiteny hoe « eny fa dia ho tanterahiko daholo izay fitakiana rehetra sy marary anareo ».
Izay angamba ny hafatra ho ampitaiko amin’ny Syndicat androany, ka hoy aho hoe : mety ho fotoana fohy , fotoana lava tsy fantako izay maha-eto ahy fa andao isika ametraka zavatra na dia herinandro, na dia iray volana na dia herintaona , isika rehetra fandalovana ity tany ity, manomeza zavatra avelanao hipetraka ho tantara ho anao. Handalo eto amin’ny ministeran’ny fitsarana aho manomboka izao hametraka ny di-tanako aho na ho fotoana lava na fotoana fohy ka dia mino aho fa mitovy miaraka amiko. Ka hoy aho aminareo hoe : andao isika hiaraka, andao isika hanandratra avo ny fitsarana ary tsy ho tenenin’ny olona intsony manomboka izao hoe io fitsarana io anie tsy misy ilana azy, inona moa ny anomezana an’io ny indépendance any, fa raha ohatra ka hoe omena indépendance izany dia tsy misy dikany ? , io fitsarana io anie ka ny greffier rehetra rehetra ao anie ka mangataka gouter foana fa raha tsy azony ity dia …, aok’izay fa andao isika ho tarafin’ny olona , ho hitan’ny olona hoe tena mba niova tokoa ny fitsarana. Efa nanome baiko aho an’ny filohany fitsarana izay efa nifandray ihany koa tamin’ny greffier any Antananarivo, izay hiainga voalohany hanome ohatra, izay hisaorako manokana, amin’ny fanekena nataonareo hiara-hiasa avy hatrany, nanome baiko aho hanadio « assainissement », hanadio ny manodidina ny fitsarana eto amin’ny tribinaly de première instance d’Antananarivo sy ny cours d’appel mba tsy hisy intsony ny gaboraraka manodidina ny fitsarana fa ho diovina mba ho mendrika, tsy hisy intsony ny mpivarotra kely mandinidinika eny, sanatria fanenjehana an’ireny akory fa famerenana amin’ny lohany kosa izany oe hasina ny fitsarana izany satria ny fitsarana dia andrandrain’ny olona fatratra ary tena iankinan’ny zavatra maro, dia aleo aloha mba hipetraka izay, mino aho fa dans l’immédiat izay, ary dia efa misaotra sahady izay tompon’andraikitra rehetra izay efa nanaiky teto Antananarivo, ary efa nomena toromarika hoe miaraha-miasa amin’ny commune sy ny privé sns, amin’ny fanantanterahana izany.
Nanome baiko ihany koa izaho, izay valable koa ho anareo rehetra manerana an’i Madagasikara, ampiasao amin’ny tokony ho izy ny vola izay raisinareo ka ao anatin’izay izany, mino aho fa rehefa hitsidika anareo any amin’ny faritra any tsy ahita sainam-pirenena rovitra intsony, tsy ahita karipetra miakatra eo amin’ny fitsarana rovitra intsony sady maloto velona ary tsy ahita rindrina maloto be intsony koa , heveriko fa tsy mila miandry vola aty amin’ny ministeran’ny Justice izany, izay manko no tena problème , tsy misy vola mana milatsaka avy any an-danitra izany fa ny heri-pontsika ny finiavantsika ny fitiavantsika hanao zavatra no ahafahatsika manao zavatra , ny zavatra asa sy ny asa vitaina ao anatin’ny salle d’audience dia angamba dia tsy dia mila vola be manao ahoana izany no mety ahavitantsika azy, matoky aho, mino ny fiarahanareo miasa ary hitsidika anareo ihany aho manomboka izao dia ahita zavatra mahafinaritra hiova ao anatiny fotoana fohy.
Famaranana mitso-drano anareo aho ahavita soa amatsara an-trakany sy andavany izao fihofanana ataonareo izao ary ny Tompo anie hanolotsaina sy hanome fahendrena anareo amin’ny zavatra rehetra ho tapahinareo sy izay zavatra rehetra ho ataonareo androany sy rahampitso. Mahaleova mahalasana, mahavita ny zavatra atao. Lazaiko fa misokatra izany ny fiofanana mandritra ny roa andro izay nomenareo ny lohateny hoe : « Un bon greffier garant de la crédibilité de la Justice » Misaotra betsaka »
Previous article« Le pouvoir de juger est un pouvoir de Dieu » extrait du discours de la Ministre HARIMISA Norovololona du 20 juin 2018
Next article59.596 euros de bénéfices déclarés pour Solo et EMERGENT de 2009 à 2012, validé par un contrôle fiscal en France en 2013
D'après les informations le, dossier concernant l’incendie des dossiers...
Lutte contre la corruption au sein du Ministère de la Justice, action ou comédie ? Comment se fait-il que l’ancienne ministre n’a pas été...
On crie par ci, on crie par-là la lutte...
La ministre de la Justice, HARIMISA Noro est celle qui a restauré la discipline et l’ordreau sein de son ministère – La gazette de...
La ministre de la justice Harimisa Noro Vololona ne...
Indice de perception de la corruption 2018 – Madagascar au 152e rang sur les 180 pays notés – Midi madagasikara du 30 janvier 2019
Comme il fallait s’y attendre, Madagascar voit toujours « rouge »...